Nikon ရဲ့ ပထမဆုံး Full Frame Mirrorless ကင်မရာကို သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကြေညာမည်
6 Aug 2018 . 2:31 PM
Digital SLR ဒါမှမဟုတ် DSLR လို့ လူသိများတဲ့ ကင်မရာတွေဟာ အခုအချိန်မှာတော့ ခေတ်ဟောင်းနည်းပညာတစ်ခုလိုဖြစ်စပြုနေပြီးတော့ Sony ၊ Fujifilm လိုမျိုး ကုမ္ပဏီတွေက သယ်ရလွယ်ကူတဲ့အပြင် အရည်အသွေးပိုင်းအရ အလွန်သာလွန်နေတဲ့ Mirrorless Camera တွေကပဲ ကင်မရာဈေးကွက်ကို ရယူထားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ Professional Full Frame Mirrorless ကင်မရာတွေကို အမြောက်အများထုတ်လုပ်နေတာက Sony ပဲဖြစ်ပြီးတော့ Sony ရဲ့ A7 Series ကင်မရာတွေနဲ့ A9 ကင်မရာဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအရ ဈေးနှုန်းတူ DSLR Full Frame ကင်မရာတွေထက် တော်တော်လေးကိုသာလွန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် DSLR ကင်မရာတွေမှာ ဆရာတွေဖြစ်နေတဲ့ Canon နဲ့ Nikon တို့အတွက်လည်း Full Frame Mirrorless ကင်မရာတွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Nikon ကတော့ Full Frame Mirrorless ကကင်မရာကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ကြံစည်နေတာ အခုဆိုရင် အချိန်အနည်းငယ်ကြာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးတော့ ထုတ်လုပ်မယ့်အချိန်ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုကြေငြာချက်အရ Nikon ရဲ့ ပထမဆုံး Full Frame Mirrorless ကင်မရာကို လာမယ့် သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ မြင်ရတော့မှာပါ။
While we wait for more teasers and leaks, here you havealittle comparison between the paper #nikonmirrorless andaCamera we know very well forafew years. The D7000… I think there is potentially enough room for an 3.5 inch screen. #nikon #mirrorless #nikonmirrorless #bastelnmitpapier #workingwithpaper #nikond7000
A post shared by BuildYourCamera (@buildyourcamera) on Jul 30, 2018 at 11:02pm PDT
အခုလိုမျိုး Nikon ကနေ တရားဝင်ကြေငြာမယ့်အချိန်ကိုတင် ကြေငြာခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ အခု Nikon Full Frame Mirrorless ကင်မရာအသစ်ရဲ့ Teaser Video အချို့ကိုလည်း တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အခု Teaser Video တွေအရ Nikon ဟာ ယခု ကင်မရာအသစ်မှာ Mount အသစ်ကို အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပြီး Camera System အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Lens တွေကိုလည်း ပြောင်းလဲပြီး အသုံးပြုရမှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Nikon အနေနဲ့ အခုအချိန်မှ Full Frame Mirrorless ကင်မရာဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ Sony လိုမျိုး ပြိုင်ဘက်တွေကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါ့မလား?
Digital SLR ဒါမှမဟုတျ DSLR လို့ လူသိမြားတဲ့ ကငျမရာတှဟော အခုအခြိနျမှာတော့ ခတျေဟောငျးနညျးပညာတဈခုလိုဖွဈစပွုနပွေီးတော့ Sony ၊ Fujifilm လိုမြိုး ကုမ်ပဏီတှကေ သယျရလှယျကူတဲ့အပွငျ အရညျအသှေးပိုငျးအရ အလှနျသာလှနျနတေဲ့ Mirrorless Camera တှကေပဲ ကငျမရာဈေးကှကျကို ရယူထားတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာ Professional Full Frame Mirrorless ကငျမရာတှကေို အမွောကျအမြားထုတျလုပျနတောက Sony ပဲဖွဈပွီးတော့ Sony ရဲ့ A7 Series ကငျမရာတှနေဲ့ A9 ကငျမရာဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးအရ ဈေးနှုနျးတူ DSLR Full Frame ကငျမရာတှထေကျ တျောတျောလေးကိုသာလှနျနပွေီဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ DSLR ကငျမရာတှမှော ဆရာတှဖွေဈနတေဲ့ Canon နဲ့ Nikon တို့အတှကျလညျး Full Frame Mirrorless ကငျမရာတှကေို ထုတျလုပျဖို့လိုအပျလာပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံအခွစေိုကျကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈတဲ့ Nikon ကတော့ Full Frame Mirrorless ကကငျမရာကို ထုတျလုပျဖို့ ကွံစညျနတော အခုဆိုရငျ အခြိနျအနညျးငယျကွာနပွေီဖွဈပွီးတော့ နောကျဆုံးတော့ ထုတျလုပျမယျ့အခြိနျကို ထုတျပွနျကွငွောလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ အခုကွငွောခကျြအရ Nikon ရဲ့ ပထမဆုံး Full Frame Mirrorless ကငျမရာကို လာမယျ့ သွဂုတျလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ မွငျရတော့မှာပါ။
အခုလိုမြိုး Nikon ကနေ တရားဝငျကွငွောမယျ့အခြိနျကိုတငျ ကွငွောခဲ့တာမဟုတျဘဲ အခု Nikon Full Frame Mirrorless ကငျမရာအသဈရဲ့ Teaser Video အခြို့ကိုလညျး တငျထားခဲ့ပါတယျ။ အခု Teaser Video တှအေရ Nikon ဟာ ယခု ကငျမရာအသဈမှာ Mount အသဈကို အသုံးပွုလာမှာဖွဈပွီး Camera System အသဈတဈခုဖွဈလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Lens တှကေိုလညျး ပွောငျးလဲပွီး အသုံးပွုရမှာပါ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ Nikon အနနေဲ့ အခုအခြိနျမှ Full Frame Mirrorless ကငျမရာဈေးကှကျထဲကို ဝငျရောကျလာမှာဖွဈတဲ့အတှကျ လကျရှိဈေးကှကျထဲမှာရှိနတေဲ့ Sony လိုမြိုး ပွိုငျဘကျတှကေို ယှဉျပွိုငျနိုငျပါ့မလား?
by 2B . 23 hours ago